တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း အောင်စာရင်း ထွက်ရှိမည့်ရက် အတည်မပြုနိုင်သေးဟု ပညာရေး ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးေ? - Yangon Media Group
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်စာရင်းကို လာမည့် ဇွန် ၂ ရက်တွင် ထုတ်ပြန်မည်ဟု လူမှုကွန်ရက်တွင် ထွက်ပေါ်နေသည့်ကိစ္စကို ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် အတည်ပြုထားခြင်း မရှိကြောင်းနှင့် အောင်စာရင်းထွက်မည့်ရက်ကို ကြေညာပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ပညာသင်နှစ်အတွက် ၂ဝ၁၈ ခုနှစ် မတ်လတွင် ဖြေဆိုခဲ့သော တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း အောင်စာရင်းကို ဇွန် ၂ ရက်တွင် ထုတ်ပြန်မည်ဟု လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာများတွင် ကျယ်ကျယ် ပြန့်ပြန့် ထွက်ပေါ်လျက်ရှိနေ ကြောင်းသိရသည်။
ယင်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီး မေ ၂၁ ရက်တွင်ပြုလုပ်သော ဝန်ကြီးဌာနများ၏ တစ်နှစ်တာအတွင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့မှုများအကြောင်းကို သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ရာ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ပြည် ထောင်စုဝန်ကြီးအား အောင်စာရင်းထွက်မည့်ရက်ကို မေးမြန်းရာတွင် အောင်စာရင်းထွက်မည့်ရက်အား ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ကြေညာပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး လက်ရှိ ထွက်ပေါ်နေသော အောင်စာရင်း ထွက်မည့်ရက်များကို အတည်ပြုထားခြင်းမရှိသေးကြောင်း ပြန် လည်ဖြေကြားခဲ့သည်။ ”ကျွန်တော်ဖြေကြားလိုတာကတော့ နှစ်စဉ်ဇွန်လထဲမှာ ထုတ် ပြန်နိုင်အောင် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနက အမြဲကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါကိုလည်း ထုတ်ပြန်ခါနီးပြီဆိုရင် ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနသတင်းစာတွေကနေ ပြည်သူ တွေအားလုံးကို အသိပေးဆောင်ရွက်တာဆိုတော့ အဲဒီအတိုင်းပဲ နှစ်စဉ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ အွန်လိုင်းကဟာတော့ ကျွန်တော်တို့ မသိဘူးခင်ဗျ။ ကျွန်တော်တို့ မလုပ်ပါဘူး”ဟု ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးသိမ်းကြီးက ပြောသည်။
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်စာရင်းထွက်မည့်ရက်နှင့်ပတ်သက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာနမှလည်း ထုတ်ပြန်ပြောကြားထား ခြင်းမရှိသေးသလို၊ အောင်စာရင်းများ ထုတ်ပြန်မည်ဆိုပါက တိုင်းဒေသကြီး ပြည်နယ်ပညာရေးမှူးရုံးများသို့ အောင်စာရင်းများပေးပို့ ရမည်ဖြစ်သည့်အတွက် အောင်စာရင်းများပေးပို့ထားခြင်းရှိ၊ မရှိနှင့် အောင်စာရင်းထွက်မည့်ရက်ကို အတည်ပြုပေးထားခြင်းရှိ၊ မရှိကိုတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်နယ်ပညာ ရေးမှူးရုံးများသို့ မေးမြန်းရာတွင်လည်း အတည်ပြုပေးပို့ထားခြင်း မရှိသေးကြောင်း သိရသည်။ ”ကျွန်တော်တို့ဘက်တော့ အောင်စာရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘာမှမသိရသေးပါဘူး။ အွန်လိုင်းပေါ် မှာတော့ အမျိုးမျိုးပြောနေကြတာ တော့ တွေ့ရပါတယ်” ဟု မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာနမှ လက်ထောက် ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာသိန်းဇံက ပြောကြားသည်။
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ဟင်္သတခရိုင်ပညာရေးမှူး ဦးမြင့်ဝင်းကလည်း ”ကျွန်တော်တို့ဆီကို အောင်စာရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘာမှမပို့သေးပါဘူး။ နှစ်ရက်နေ့ထွက်မယ်ဆိုတာတော့ အွန်လိုင်းမှာ တော့ တွေ့နေရတယ်။ အောင်စာရင်းကထွက်ခါနီးပြီဆိုရင် ကြိုတင် ပြင်ဆင်ရမယ့်ကိစ္စတွေအတွက်အကြောင်းကြားစာပို့ပါတယ်” ဟု ပြောကြားသည်။ တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာ ဖြင့် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲကို ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ ရှစ်သိန်းနီးပါး ဝင်ရောက်ဖြေဆိုထားသည်။
ဖူလ်ဟမ်နှင့် ဗိုလ်လုပွဲသို့ တက်ရောက် အားပေးရန် မင်းသား ဝီလျံကို ဗီလာအသင်း ဖိတ်ကြား
အမေရိကန် ကုန်စည်အချို့ သွင်းခွင့်ပြုဖို့ တရုတ်ကုမ္ပဏီတွေ အစိုးရကို တောင်းဆို
ထိုင်းသို့ လုပ်သားပို့ဝန်ဆောင်ခ သတ်မှတ်နှုန်းထက်ပိုယူပါက လိုင်စင်အပြီးပိတ်မည်ဟု အေဂျင်စီ??
မိုးကောင်းမြို့နယ်တွင် သံလမ်းဖြတ်ကူးသည့် မော်တော်ယာဉ် ရထားနှင့်တိုက်မိ
မြစ်ဆုံစီမံကိန်း ဖျက်သိမ်းရေး နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကွန်ရက်ကို စတင်ဖွဲ့စည်းရန် အကြိုလှုပ်ရှာ?
အွန်လိုင်းမှ လောင်းလာခြင်းကြောင့် နှစ်လုံး သုံးလုံးထီနှင့် ဘောလုံး လောင်းကစားများ ဖမ်းဆီး